News Collection: कहालिएका प्रचण्ड किनबेचमा?
कहालिएका प्रचण्ड किनबेचमा?
काठमाडौं। एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इतिहासमै सम्भवतः पहिलोपक पार्टीभित्र सबै निकायमा अल्पमतमा पर्ने संकेत देखिएपछि आफ्नो सभासद र केन्दीय सदस्यहरुको नाडी छाम्न ब्यस्त छन्। संसदीय दलमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका प्रचण्ड केन्द्रीय समितिमा आफ्नो स्थिति आंकलन गर्न लागेका छन्। मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई मिलेर अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता दुवै ठाउँमा संकट पार्ने सम्भावना देखिएपछि प्रचण्ड पक्षले आफ्नै पार्टीका सभासद समेत खरिद गर्नेसम्मको रणनीति बनाएको सूचना चुहिएर वैद्य क्याम्पमा पुगेको छ।
किरण पक्षले पार्टी फुटाउन लागेको हल्ला करीव दुई महिना चलाएपछि पनि पार नलागेपछि प्रचण्ड पक्षले पुनः अर्को हल्ला आफैंले चलाएको छ। संसदीय दलको नेताबाट प्रचण्डलाई हटाएर बाबुरामलाई नेता र किरण पक्षका सीपी गजुरेललाई उपनेता बनाउने तथा महाधिवेशनमा गएर मोहन वैद्यलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको भन्ने प्रचार प्रचण्ड पक्षलेनै गराएको आरोप किरण पक्षधर नेताहरुले बताएका छन्। बाबुरामका राजनीतिक सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले फेसबुकबाटै सो प्रचारको खण्डन गर्नुले पनि यो प्रचारको पछाडि गम्भीर अर्थ रहेको बुझ्न सकिन्छ। विशेषगरी २०६८ असार १० गते १ सय ५९ जना सभासदको हस्ताक्षर बुझाएर किरण र बाबुरामले आफूलाई दबाब दिएपछि प्रचण्ड हतास बनेको बताइएको छ। प्रचण्डले पहिले वर्षमान पुन, पोष्टवहादुर बोगटी, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरुमार्फत पहिले अरु दलका सभासद खरिद गर्ने योजना बनाएर सरकारमा जाने रणनीति तय गरेको चर्चा माओवादी वृत्तमा चलेको थियो। तर सो योजना असफल भएपछि अहिले अब आफ्नै सभासद किन्ने योजना बनेको चर्चा पनि यसै बेला चलेको छ। असार १० गते शुक्रवार १ सय ५९ को दुई तिहाइ सभासदको हस्ताक्षर जुटाएपछि इतिहासमै पहिलो पटक प्रचण्ड आतंंकित बनेका छन्। यसबीचमा किरण र बाबुराम मिलेर आफू विरुद्ध दुई तिहाई सभासदको झटारो हानेपछि प्रचण्डले त्यस्तै परे आफ्नै सभासदलाई प्रलोभन दिएर भने पनि हस्ताक्षर फिर्ता गराउने अभियान चलाएका छन्। पार्टीमा ऐतिहासिक रुपमा संकटमा परेका प्रचण्डले अब आफ्नै सभासदहरु खरिद गरेर आफू मजबूत हुने पहिलो प्रयत्न गर्नेछन्। यदि त्यो प्रयत्न सफल नभएमा बाबुराम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई साथ लिएर किरण पक्षलाई तह लगाउने दोस्रो योजना बनाएको स्रोतले जनाएको छ। त्यो पनि सफल नभएमा आफैं आत्मालोचना गरेर सबैलाई आत्मालोचना गराउने र अहिलेको संकटबाट पार पाउने योजनामा प्रचण्ड रहेको बताइन्छ। यसबीचमा सभासद र केन्द्रीय सदस्यहरुसंग प्रचण्ड पक्षले घनिभूत रुपमा छलफल चलाइरहेको छ। विशेषगरी प्रचण्ड पक्षले पूर्व एमाले पृष्टभूमिका सभासद तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बढी ध्यान दिएको छ। किनकि एमाले पृष्ठभूमिबाट सभासदहरु भएकाहरु करीव ७० जना रहेका छन्। त्यस्तै एकताकेन्द्रबाट आएका आठ मध्ये अमिक शेरचन र भीमप्रसाद गौतम प्रचण्डको विपक्षमा रहे पनि अरुको समर्थन लिने प्रयास भइरहेको बताइन्छ। अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले खनेको खाल्डोमा पर्ने अवस्थामा पुगेपछि इतिहासमै सबैभन्दा बढी कहालिएको चर्चा पनि माओवादी वृत्तमा चलेको छ। यदि अहिलेको अवस्थालाई सम्हाल्न नसकेको खण्डमा अध्यक्ष प्रचण्डले दलको नेता र अध्यक्ष दुवै पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत किरण पक्षका प्रभावशाली नेता नेत्रविक्रम चन्दले पनि दिइसकेका छन्। यसअघि विभिन्न चलाखी गरेर उम्किदै आएका प्रचण्ड यसपटक उम्किने ठाउँ नरहेको र उनले पार्टी सामु झुक्नु बाहेक विकल्प नरहेको पनि बताइएको छ। 'विगतमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दा उठाउनेहरुलाई तपाईकै हुँ भन्ने, भारतसंग सुमधूर सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेहरुलाई आफू पनि त्यही पक्षमा छु भनेर अल्मल्याउदै आएका थिए र अहिलेसम्म टिक्दै आएका, अब उम्किने बाटो छैन।' किरण पक्षका एक नेताले भने। प्रचण्ड संकटमा परेपछि उनको फोटोकपी बन्न खोजेका प्रकाश समेत अहिले अत्तालिएको अवस्था छन। १ सय ५९ जना सभासदको मत सार्वजनिक भएपछि हामीलाई पनि सोधेको भए हस्ताक्षर गर्ने थियौं भनेर प्रकाशले भनेको चर्चा पनि चलेको छ। आफू मजबुत हुने आधार खोजिरहेका प्रचण्डले यसबीचमा आवश्यक रणनीति तय गर्नकै लागि बैठक स्थगित गरेको चर्चा छ।